Umaki: ukutholakala | Martech Zone
Ukubuyekezwa Kwesoftware, Ukwelulekwa, Ukuqhathanisa, Namasayithi Wokutholwa (Izinsiza ezingama-65)
NgoLwesine, ngoMashi 11, 2021 NgoLwesithathu, Juni 2, 2021 Douglas Karr
Abantu abambalwa bayazibuza ukuthi ngikwazi kanjani ukuthola inqwaba yamapulatifomu obuchwepheshe bokuthengisa nokumaketha namathuluzi ngaphandle lapho ababengakezwa ngawo, noma lokho kungaba yi-beta. Ngaphandle kwezixwayiso engizisethile, kunezinsizakusebenza ezinhle lapho zokuthola amathuluzi. Ngisanda kwabelana ngohlu lwami noMatthew Gonzales futhi wabelana ngezintandokazi zakhe ezimbalwa futhi kwaqala ngami
Amabhizinisi asebenzisa i-Social Media Ukubikezela Isidingo: PepsiCo
NgoMsombuluko, Februwari 25, 2019 NgoMsombuluko, Februwari 25, 2019 UDillon Hall
Ukufunwa kwabathengi namuhla kuguquka ngokushesha kunanini ngaphambili. Ngenxa yalokhu, ukwethulwa kwemikhiqizo emisha kwehluleka ngamanani aphezulu kakhulu. Ngemuva kwakho konke, ukuhlola ngokunembile imakethe nokubikezela ukufunwa kudinga ama-terabyte wedatha, asukela ezinombolweni zokuthengisa, ukuthengiselana nge-e-commerce, umlando ongaphandle kwesitoko, isilinganiso samanani entengo, ukuhlelwa kokuphromotha, imicimbi ekhethekile, amaphethini wesimo sezulu, kanye ezinye izinto eziningi. Ukwengeza kulokho, amabhizinisi amaningi aqhubeka nokuziba ukubaluleka kokusebenzisa inkhulumomphendvulwano yabathengi eku-inthanethi ukubikezela ukuthenga okuzayo
Uhambo lwe-Agile Marketing
NgeSonto, ngoMashi 19, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngeminyaka eyishumi yokusiza izinkampani ukukhulisa amabhizinisi abo ku-inthanethi, siqinise izinqubo eziqinisekisa impumelelo. Kaningi kunalokho, sithola ukuthi izinkampani zilwa nokumaketha kwazo kwedijithali ngoba zizama ukugxumela ngqo ekusebenzeni kunokuba zithathe izinyathelo ezidingekayo. Ushintsho Ekumakethweni Kwedijithali Ukuguqulwa kokumaketha kufana nokuguqulwa kwedijithali. Ku-Study Study kusuka ku-PointSource - Ukwenza i-Digital Transformation - idatha eqoqwe kwabenza izinqumo abangama-300 kwezokukhangisa, i-IT, kanye namaphoyinti okusebenza.
Uhambo Lwamakhasimende Lokuthengisa Lushintshe ngokuphelele
NgoLwesithathu, Januwari 6, 2016 NgoLwesine, Januwari 7, 2016 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi ngiyazibuza ukuthi ngabe ngibhale ezinye izikhulu eziyikhulu mayelana nokushintsha indlela yokuziphatha kokuthenga, ngamakhulu emithombo eyengeziwe yedatha, uma ngabe amathemba ezoqala ukulalela. Kubonakala sengathi abalaleli, noma kunjalo. Lapho sizwa ukuthi sihlukile bese senza ucwaningo sihlala sithola into efanayo. Ukuziphatha kokuthenga kwabathengi kuyashintsha. Ushintsho beluhamba kancane ekuqaleni, kepha manje luyashesha. Eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule, kwezivakashi eziyi-10 - 1 noma 2
I-Playbook ye-B2B Online Marketing
NgoLwesine, Agasti 7, 2014 NgoLwesithathu, Agasti 6, 2014 Douglas Karr
Lokhu kungumbono omuhle kumacebo athunyelwe cishe ngawo wonke amasu we-inthanethi aphumelelayo ebhizinisini nakwebhizinisi. Njengoba sisebenza namakhasimende ethu, lokhu kusondele ngokubukeka nokuzizwa okuphelele kokuzibandakanya kwethu. Ukwenza ukumaketha oku-inthanethi kwe-B2B nje ngeke kukhulise impumelelo futhi iwebhusayithi yakho ngeke ikhiqize ngomlingo ibhizinisi elisha ngoba ikhona futhi libukeka lilihle. Udinga amasu afanele wokuheha izivakashi nokuguqula